Iyo yakagadzikana vhezheni yeOpenMandriva Lx 4 pakupedzisira inosvika | Linux Vakapindwa muropa
Anenge makore matatu mushure mekuumbwa kwebazi rekupedzisira rakakosha uye mwedzi mina mushure mekusunungurwa kwe beta, pakupedzisira Kuburitswa kwakagadzikana kweiyo OpenMandriva Lx 4.0 Linux kugoverwa kwakaburitswa.
Iyo purojekiti iri kuvandudzwa nemauto enharaunda mushure mekunge Mandriva SA yaendesa manejimendi eprojekti kune isingabatsiri OpenMandriva Association.
1 Main makuru maficha eOpenMandriva Lx 4
2 Shanduko musystem
2.1 Dhawunirodha uye tora OpenMandriva Lx 4
Uku kuburitswa kutsva kweOpenMandriva Lx 4 inozivikanwa nezvekuchinja kune iyo RPMv4 package maneja, iyo DNF koni yekushandisa uye iyo Dnfdragora package management GUI.
Pakutanga chirongwa ichi chaishandisa RPMv5 bazi yakagadzirirwa zvakasiyana, iyo urpmi toolkit uye iyo rpmdrake graphical mushandisi interface.
RPMv4 inoenderana neRed Hat uye inoshandiswa mukugovera senge Fedora, RHEL, openSUSE uye SUSE. Ipo iro RPMv5 bazi rakagadziriswa nevanofarira vekunze uye rave rakamira kwemakore mazhinji.
Kusiyana RPMv5, iyo RPMv4 chirongwa chinogadziridzwa uye chakachengetedzwa, uye zvakare chinopa yakazara yakazara seti yematurusi ekugadzirisa mapakeji uye zvinyorwa. Shanduko kuRPMv4 inobvumidzawo kugoverwa kubvisa zvakasviba hacks uye anobatsira Perl zvinyorwa zvino zvinoshandiswa muOpenMandriva.
Iye zvino nezvevashandi vepaisisitimu, tinogona kuona kuti Clang compiler yakashandiswa kuunganidza mapakeji yakagadziridzwa kubazi reLLVM 8.0.1.
Uyewo Dzakagadziridzwa shanduro dzeLinux kernel 5.1, Systemd 242, GCC 9.1, glibc 2.29 inosvika, binutils 2.32, OpenJDK 12, Perl, 5.28, Python 3.7.3 (Python 2 haina kubviswa mukuparadzirwa kwekutanga).
Girafu stack uye vashandisi vamiririri vakagadziridzwa: KDE Plasma 5.15.5, KDE Zvimiro 5.58.0, KDE Zvishandiso 19.04.2, Qt 5.12.3, Xorg 1.20.4, Wayland 1.17, Mesa 19.0.3, Pulseaudio 12.2, LibreOffice 6.2.4 Calligra 3.1.0, Firefox 66.0.5, Falkon 3.1.0, Krita 4.2.1, Chromium 75, DigiKam 6.0.
Pamusoro pe KDE, hwaro hwekutanga hunosanganisira iyo graphical nharaunda LXQt 0.14.
Kune rimwe divi, iyo yakagadziridzwa squid inosimudza, inouya nesarudzo yekuwedzera yekumisikidza chinja chikamu.
Imwe shanduko yakakodzera kutaurwa ndeyekuti mushure mekumisikidza kwapera, zvinokwanisika kubvisa ese asingadiwe mapakeji emitauro zvisingaenderani nemitauro yakasarudzwa.
Nokusingaperi, LibreOffice inoshandisa VCL plugin yakavakirwa paQt 5 uye KDE Mapurani 5, iyo yakaita kuti zvikwanise kuunza iyo LibreOffice interface mune yakajairika dhizaini yeKDE Plasma desktop, uye zvakare yakaita kuti zvikwanise kushandisa yakajairwa faira yekusarudza dialog kubva kuPlasma 5.
Kunze kweFirefox neChromium, ikozvino bhurawuza nyowani rinobatana nekuparadzira uye ndiyo Falkon browser, iyo inopihwa nekutadza mune iyi vhezheni itsva.
Tinogona zvakare kuona kuti OpenMandriva Lx 4 inosanganisira iyo SMPlayer media player, iyo inoshandisa iyo MPV backend nekutadza.
Mukubatana nekupera kwemvumo yeMP3, MP3 decoders uye encoders zvinosanganisirwa muchimiro chepakati.
Yezve mushandisi manejimendi, panzvimbo ye userdrake, iyo Kuser interface inoshandiswa, uye nekugadzira ekuchengetedza makopi, panzvimbo yedraksnapshot, KBackup inokurudzirwa;
Kuzivisa mushandisi nezvekuwanikwa kwemapakeji ekuvandudza, iyo Plasma software yekuvandudza applet inosanganisirwa.
De dzimwe shanduko dzatinogona kuwana mune iyi vhezheni itsva yeOpenMandriva Lx 4 ndeiyi:
OpenMandriva Control Center Configurator yakatsiva DrakX
Wakawedzera om-repo-picker app ine interface kuti usarudze marekodhi
Zviteshi zvengarava zvakagadzirirwa iyo aarch64 (Raspberry Pi 3 uye DragonBoard 410c) uye armv7hnl zvivakwa.
Mavhezheni akagadzirwa, akanyatsogadziriswa evanogadzira AMD (Ryzen, ThreadRipper, EPYC).
Dhawunirodha uye tora OpenMandriva Lx 4
Kune avo vanofarira kugona kuwana iyi nyowani vhezheni, vanofanirwa kuziva izvozvo Mufananidzo weIO unogona kutorwa pasi 2,6GB muhukuru (x86_64 uye "znver1" gomo, rakagadzirirwa AMD Ryzen, ThreadRipper, uye EPYC processors) kubva kune yekuparadzira webhusaiti yepamutemo.
Iyo yekubatanidza ndeiyi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo yakagadzikana vhezheni yeOpenMandriva Lx 4 pakupedzisira inosvika
HydraPaper, chishandiso chekumisa akasiyana mapikicha pane maviri monita